Berbera Badhasaabka saaxil o Marki Kowaad ka hadlay Khilaafka gaadiidlayda TOWFIIQ
Berbera, Gaadiidleyda Towfiiq o Mudaharaday
Sheekh Ismaaciil Dheeg Oo Sheegay Inuu Dalka Turkiga Kusoo Arkay Xaafad Booli Qaran Layidhaa Oo Masuuliyiin Somaliland Ahi Guryo Ka Dhisteen
Milletariga dawlada Itoobiya oo ka hadlay Wararka Sheegaya Dalka Masar Ay Saldhig Ciidan Ka Doonayso Somaliland
Hiroshima iyo Nagasaki: Godka la hilmaamay ee laga qoday macdanta laga sameeyay nukliyeerka
Diyaaradda Air India oo labo qeybood u kala go'day iyadoo wadda 191 qof
Suldaan Reer Awdala oo Si adag u duray Gudoomiye-xigeenka Wakiilada S/land,Reer Awdalna ku tirtirsiiyey inay Doorashada galaan
Nuxurka Kulan M/weyne Muuse Biixi Kula yeeshay Qasriga Madaxtooyada Wefti Culus oo China ka socda
Ivan Safrovov ayaa soo muuqday isaga oo gacmaha ka katiinadeysan oo loo sii wado maxkamad, waxaana garbaha hayay laba nin oo afka u xiran yahay.
Taageerayaashiisa ku sugnaa afaafka hore ee maxkamadda wuxuu u sheegay in “inuusan dambiila ahayn”.
Xarigga loo geystay weriyaha horay uga soo warrami jiray arrimaha militariga, waxay aragagax ku abuurtay suuufiyiinta dalkaasi Ruushka, Iyada oo ay laanta adeegga sirdoonka ee FSB ay ku eedeysay inuu basaas u ahaa laanta sirdoonka Czech, “taasina aysan macquul ahayn”.
Kremlin oo ammaantay howsha ay sirdoonka qabteen waxay xariggiisa ku tilmaantay “mid ay tayadiisu sarreyso”, haddana lama shaacinin caddeymaha ku saabsan waxa loo haysta weriye Ivan Safronov.
Sida oo kale waxaa jira cabsi laga qabo iney laanta sirdoonka ee FSB ay sii kordhineyso xadhigga dadka loo haysto khiyaano iyo basaasnimo aad u weyn taas oo hadda laga dareemayo Ruushka.
‘Putin dan kama lahan aragtida shacabka’
“Fikirkeyga waxaa ugu horreeya ee ku soo dhacay waa in aan 20 sano aan xusuusteyda dib u celiyo,” ayuu yiri Grigory Pasko, oo weli xusuusta xariiggii isaga loo geystay sannadkii 1997-kii.
Mr Pasko wuxuu sida oo kale ahaa weriye ka soo warrama arrimaha militariga, wuxuuna marar badan wax ka qoray xadgudubka ciidamadda badda Ruushka ay u geysteen deegaanka. Waxaana xilligaasi lagu eedeeyey inuu xog sir ah uu la wadaagay dalka Japan, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xarig ah. Waxaa la sii daayay sannadkii 2001.
Arintan ayaa dhalisay caro dadweyne oo gudaha iyo dibedaba ah, ugu dambeyntiina Mr Pasko waxaa lagu sii daayay si sharaf leh.
“Waxaan u maleynayaa wixii intaa ka dambeeyey inay ka cabsadeen iney wariyeyaasha taabtaan,” ayuu yiri Mr Pasko oo BBC u warramay.
“Waqtigaas, Ruushka wuxuu lahaa sumcad caalami ah. wuxuu ku biiray hannaanada caalamiga ah, waxaana laga tixgeliyey aragtida adduunka,” ayuu yiri.
“Hadda Vladimir Putin wuxuu xilka sii haynayaa 20 sano isaga oo dan iyo muraad aan ka lahayn waxa ay dadka ka aaminsan yihiin,” ayuu hadalka ku sii daray, wuxuuna farta ku fiiqay madaxweynaha Ruushka inuu wax ka beddelay dastuurka dalka si uu u helo 2 xilli oo kale oo Kremlin uu ka arrimiyo. Ma jirto cid joojineyso ama horistaagi karta. Waxay doonaan ayey sameynayaan xilliga ay doonaan, sida ay u doonaan, cidda ay doonaanna wey ku sameeynayaan,” sida uu aaminsan yahay.
Xarigga Mr Safronov ayaa la rumeysan yahay in uusan wax xiriir ah la lahayn xirfadda wariyenimada, balse Grigory Pasko wuxuu ka shaki qabaa inuu xarigga ku muteystay mowduucyo lama taabtaan ah inuu sidiisi oo kale uu wax ka taabtay.